Ciidan tababar kusoo qaatay Jabuuti oo dib usoo laabtay | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidan ka tirsan Darawiishta Booliska Soomaaliyeed oo tababar kusoo qaatay waddanka Jabuuti ayaa dalka dib loogu soo celiyay kaddib muddo 3 bil ah oo ay halkaasi ku soo qaateen tababar heerkiisu sarreeyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliyeed, oo tababar ku soo qaatay dalka Jabuuti ayaa dalka dib loogu soo ceiyay iyadoo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lagu soo dhaweeyay.
Cutub ka tirsan Ciidanka Darawishta Boliiska Soomaaliyeed oo mudo 3 -bilood ah tababar heerkiisu sareeyo ku qaadanayay dalka Jabuuti ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan cadde ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Tababarka Ciidankaan la siiyay ayaa waxaa bixinayay macalimiin quburo ah oo ka socday Ciidanka Carabinieri -ga Taliyaaniga oo ah ciidan inta badan fuliya waajibaadka booliska gudaha, waana mid ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn ee sharci fulinta Talyaaniga, waxay ciidankaasi had iyo jeer gacan siiyaan dhismaha Daraawiishta Boliiska Soomaaliyeed.
Soo laabashada Ciidankaan ayaa laga rajeynayaa inay qeyb ka noqodaan, howlgalada sugida Nabadgelyada iyo sifeynta Argagixisada.